सर्वोच्चको फैसलापछि कुन नेताले के भने ? – खबर नेटवर्कस्
खबर नेटवर्कस् > खबर नेटवर्कस् > सर्वोच्चको फैसलापछि कुन नेताले के भने ?
क्लिकमान्डु २०७८ असार २८ गते १६:१६ मा प्रकाशित
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापनाको फैसला गर्दै ७ दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन बोलाउने आदेश जारी गरेको छ । साथै भोलि मंगलबार साँझ ५ बजेभित्र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तका लागि परामादेश जारी समेत गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको उक्त फैसला आएसँगै विभिन्न नेताहरु आ–आफ्नै प्रतिक्रिया दिएका छन् । केही नेताहरुले सर्वोच्चको फैसलाले संविधानको रक्षा गरेको र प्रतिगमन परास्त भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् भने नेकपा एमालेको ओली पक्षीय नेताहरुले अदालतको फैसला पूर्वाग्रहपूर्ण र निर्दलीयतातर्फ जाने बिजारोपण बताएका छन् ।
विभिन्न दलका नेताहरुले सामाजिक सञ्जालमार्फत् आफ्नो समर्थन र विरोध देखाइरहेका छन् ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले संविधानको रक्षा र लोकतन्त्रको जित भएको बताएका छन् ।
‘सर्वोच्च अदालतको आजको फैसलाले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाको पक्षमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ । यसको हामी स्वागत गर्दछौं । प्रतिगमन विरुद्ध संघर्ष गर्ने सबै राजनीतिक पार्टीहरु, नागरिक आन्दोलन र आम जनसमुदायलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछु,’ सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा श्रेष्ठले लेखेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले मिचेको संविधानलाई अदालतले सही दिशामा ल्याईदिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको आवेगपूर्ण कदम सच्याउँदै सम्मानित संवैधानिक इजलासको विवेक पूर्ण फैसला । लिक बाहिर धकेलिएको संविधानलाई ट्र्याकमा फर्काउने कदम,’ शर्माले ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘केवल सरकार निर्माण होइन, इतिहास निर्माणको अवसरका रुपमा यसलाई उपयोग गर्नुपर्ने दायित्व कांग्रेसको काँधमा छ ।’
नेपाली कांग्रेसका अर्का नेता गगन थापाले सर्वोच्च अदालको फैसला मान्दिन भन्ने छुट कसैलाई नहेको र अराजक गतिविधि गर्नेहरु फैसला कार्यान्वयनको बाधक हुने बताएका छन् ।
‘प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक थियो, अदालतले ब्याख्या गर्दै संविधानको रक्षा गरेको छ । अदालतको आदेश मन परेन भने असहमत हुन पाइन्छ तर अस्वीकार गरिदैन । उत्तेजना, दम्भ र अहंकार बोकेर फैसला कार्यान्वयनमा बाधा पुर्याउने मुर्खता कसैबाट नहोस् भन्ने आशा गरौं । नत्र भिरबाट खस्नेलाई राम..राम…,’ थापाले ट्वीट गरेका छन् ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता वर्षमान पुनले अब देशले फेरी प्रतिगमन भोग्नु नपर्ने बताएका छन् । ‘संबिधान, लोकतन्त्र र शान्तिका लागि न्यायालयको ऐतिहासिक फैसला । अब देशले ओलीतन्त्र फेरी ब्यहोर्नुपर्ने छैन । प्रधानन्यायाधिश र संबैधानिक बेन्चका न्यायमूर्तीहरुलाई विशेष धन्यवाद,’ उनले फेसबुकमा लेखेका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले अदालतको फैसलालक्षित गर्दै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा ‘संसदीय व्यवस्था र दलीय प्रणालीमाथि गम्भीर आघात । सुदूर भविष्यमा नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनले अस्थिरताको दुश्चक्र बेहोर्नु पर्नेभयो,’ लेखेका छन् ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व उप्रधानमन्त्री कमल थापाले अदालतको फैसलापछि मुलुक झन अस्थिरतातर्फ जाने संकेत देखिएको बताएका छन् । ‘सर्वोच्च अदालतमा आज गोरु ब्यायो । राजनीतिक फैसला, कार्यान्वयनमा जटिलता, देश अस्थिरतामा फस्ने खतरा,’ उनले ट्वीटरमा लेखेका छन् ।
नेकपा एमालेका नेता योगेश भट्टराईले अदालतको फैसलाको स्वागत गर्ने बताएका छन् । ‘सर्वोच्च अदालतको संबैधानिक बेन्चद्वारा प्रतिनिधिसभाको पुनः स्थापना गर्नेगरी गरेको आदेशको सम्मान र स्वागत गर्दछु, उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘बदलिएको परिस्थीतिमा प्रतिनिधिसभाको बाँकी कार्यकालको सुनिश्चिततासहित नेक
क्लिकमाण्डु असार २८, २०७८
नेपाल टेलिकमको सर्भर ह्याकिङको प्रयास, कल डिटेल रेर्किङसम्म पुग्न सकेनन् ह्याकर
उत्सर्जन छली गरेको अभियोगमा मित्सुबिसीले तिर्यो साढे २ करोड यूरो जरिवाना